Naghachi furu efu thumbnails na Google Chrome? | Akụkọ akụrụngwa
Na-efu thumbnails na Google Chrome na New Tab
You ma ihe na - eme ma ị mepee New Tab na Google Chrome? Ikekwe, ị hụbeghị ọnọdụ dị oke mkpa n'ihi omume nke dugara gị na njikwa ọnụọgụ dị iche iche nke ibe weebụ na taabụ dị iche iche na ọbụlagodi na windo ọhụrụ nke ihe nchọgharị Internetntanetị a.
Ọ bụrụ na imeghe Google Chrome ugbu a na mgbe emechara, ka a «New Tab» na «CTRL + T» (ma ọ bụ jiri obere akara ngosi dị n'akụkụ aka nri nke ikpeazụ oghe taabụ) ị ga-enwe ike ịhụ na igbe isii dị iche iche dị iche iche pụtara ozugbo. Ha na-abịa ime ka ngosi dị ntakịrị nke ibe weebụ ndị anyị gara leta kachasị. Ugbu a, gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na anyị ehichapụ otu n’ime ha na mberede.
Enwere ike iweghachite igbe obere ehichapụ na Google Chrome?
Azịza ya dị nso, n'ihi na ihe niile ga-adabere na mgbe anyị mechara ya. Google akọwaala nke ọma na ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ọgbakọ maka ihe ị nwere ike ime ma a bịa weghachite otu igbe ndị a, ma ọ bụrụ na ị ihichapụ ya na mberede. Ọzọ anyị ga-edebe obere ijide ihe ị ga-amasị ma ọ bụrụ na nke a emee gị.
Mgbe ị wepụsịrị igbe ndị a (lee thumbnail view) na «New Google Chrome Tab», na ala ị ga-enwe ike ịmasị ọnụnọ nke ọrụ abụọ dị ezigbo mkpa, nke ọ dị mwute ikwu na ndị ọrụ ya anaghị echebara ya echiche. Ndị a ghọrọ:
«Wepu»Nke ahụ ga - enyere anyị aka ịlaghachi na taabụ ikpeazụ anyị mechara hichapụ ya.
«Weghachi niile»Kedu nke ga - eweghachite taabụ niile ahụ anyị gaara ehichapụ.
Ọ bụrụ na anyị ehichapụwo otu igbe ndị a n'amaghị ama, n'oge ahụ anyị kwesịrị ịhọrọ nhọrọ mbụ anyị kpọtụrụ aha n'elu; ọ bụrụ na anyị ewepụ igbe ahụ kwuru wee mechie ihe nchọgharị ,ntanetị, ọrụ ndị a agaghị apụta mgbe anyị laghachiri na Google Chrome na mgbe e mesịrị, na "New Tab"; azịza anyị, ọ dị nwute na ọ bụ "You nweghị ike iweghachi obere igbe" mgbe emechiri ihe nchọgharị Google Chrome.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Na-efu thumbnails na Google Chrome na New Tab
Ndewo aha m bụ Evelia.
Ka anyị kwuo na nsogbu m nwere na windo pere mpe a bụ na enwetaghị m ihe ọ bụla na ya, ka anyị kwuo na ha enweghị oghere na amaghị m ihe kpatara ya. Nwere ike ịgwa m ihe dị njọ?
Nzacha agba ọhụrụ abụọ iji jiri na Instagram
GitHub: Otu esi achọta ma wụnye plugins Firefox site na ebe ahụ